तपाईको हातमा ‘X’ चिन्ह छ ? छ भने यस्तो हुनेछ तपाईको भविष्य – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/तपाईको हातमा ‘X’ चिन्ह छ ? छ भने यस्तो हुनेछ तपाईको भविष्य
अनुसार पुरुषको दायाँ हात र महिलाको बायाँ हातको रेखा हेर्ने गरिन्छ । हरेक व्यक्तिको हत्केलामा विभिन्न प्रकारका हस्तरेखाहरु हुन्छन् । आज हामी तपाईलाई हत्केलामा भएको यस्तै एउटा रेखाको बारेमा बताउँन गइरहेका छौ ।